အသက် ၂၀ အရွယ်မတိုင်ခင် ကလေးမွေးခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များ
အသက် ၂၀ အရွယ်မတိုင်ခင် ကလေးမွေးခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များ
အသက် ၂၀ မတိုင်ခင် ကလေးမွေးခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ အမေရိကန်အနုပညာရှင်တွေများတာတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြောင့် ကောင်းတာတွေရှိသလို မကောင်းတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင် ဖြစ်လာကြတဲ့ အခါ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ လက်ထပ်တာဟာ စောတယ် ၊ နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ် ဆိုတဲ့ ရှေးဆိုးစွဲ အယူတွေရှိတတ်ကြပေမယ့်လည်း သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ သာသက်ဆိုင်တယ် ဆိုတာတွေကသက်သေပြလို့ နေပြန်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေလည်း ဖြစ်ကြသလို နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားရင်း ကလေးတွေ ကို အခုလိုစောစီးစွာ ယူလိုိ့မိခင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ မိန်းမသားတွေ အနေနဲ့တော့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
Kylie Jenner ကတော့ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပထမဆုံးရင်သွေးလေး ဖြစ်တဲ့ Stormi Webster ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာ မွေးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Kylie ကတော့ အသက်ငယ်ပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကဆိုရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀ ခန့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
Sofia Vergara ဟာ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာ ကလေးမွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မွေးခဲ့တာကတော့ သားယောက်ကျားလေးပါ။
Jamie Lynn Spears ဟာ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာကို သူမအနေနဲ့ သမီးလေးကို မျှော်နေပြီဆိုပြီးတော့ ကြေညာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Jamie Lynn Spears ဟာ အဆိုတော် Britney Spears ရဲ့  ညီမအရင်းဖြစ်ပါတယ်။ Jamie ရဲ့ သမီးလေး နာမည်ကတော့ Maddie Briann Aldridge လို့ခေါ်ပါတယ်။
Solange Knowles ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အဆိုတော် တေးရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မှာ သားဖြစ်သူ Daniel Julez J.Smith,Jr. ကို မွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမ အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ Daniel Smith နဲ့ ရခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Niki Taylor ကတော့ အမေရိကန်ရဲ့ စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်သလို အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မှာ အမြွှာလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Naomi Judd ကလည်း အမေရိကန်ရဲ့ နာမည်ကျော် တေးသံရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို သီချင်းတွေကိုလည်း ရေးသားခဲ့သူတစ်ဦးပါ။ သူမရဲ့ နာမည်ကျော်သမီးကြီးဖြစ်သူ Wynonna ကို အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မှာ မွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အဆိုတော် မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Wynonna Judd ဟာ အသက် ၅၄ နှစ်ရှိပါပြီ။
အမေရိကန်ရဲ့  နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် တေးရေးသူ Aretha Franklin ဟာ အခုဆိုရင် အသက် ၇၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူမကလည်း အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာ သူမရဲ့ ပထမ ရင်သွေးလေးကို မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဒုတိယရင်သွေးလေးကိုတော့ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ မွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Shirley Temple ကတော့ ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝထဲ က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူမဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး အဲ့အချိန်မှာ အသက်က ၈၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူမရဲ့ ပထမ ရင်သွေးလေးကိုတော့ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာ မွေးခဲ့ပြီးတော့ အသက် ၁၇ နှစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသကျ ၂၀ အရှယျမတိုငျခငျ ကလေးမှေးခဲ့ကွတဲ့ နာမညျကြျောအနုပညာရှငျမြား
အသကျ ၂၀ မတိုငျခငျ ကလေးမှေးခဲ့ကွတဲ့ နာမညျကြျောအနုပညာရှငျတှထေဲမှာ အမရေိကနျအနုပညာရှငျတှမြေားတာတှရေ့ပါတယျ။ သူတို့နိုငျငံရဲ့ပှငျ့လငျးတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးကွောငျ့ ကောငျးတာတှရှေိသလို မကောငျးတာတှေ ရှိတယျလို့လညျး ဆိုရမှာဖွဈပါတယျ။ အနုပညာရှငျ ဖွဈလာကွတဲ့ အခါ အသကျငယျငယျရှယျနဲ့ လကျထပျတာဟာ စောတယျ ၊ နာမညျကွီးတဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျ အဟနျ့အတားဖွဈစတေယျ ဆိုတဲ့ ရှေးဆိုးစှဲ အယူတှရှေိတတျကွပမေယျ့လညျး သူတို့ကိုကွညျ့လိုကျပွနျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ကွိုးစားအားထုတျမှုနဲ့ သာသကျဆိုငျတယျ ဆိုတာတှကေသကျသပွေလို့ နပွေနျပါတယျ။ မိနျးကလေးတှလေညျး ဖွဈကွသလို နာမညျကွီးအနုပညာရှငျတှဖွေဈလာအောငျ ကွိုးစားရငျး ကလေးတှေ ကို အခုလိုစောစီးစှာ ယူလိုိ့မိခငျတာဝနျထမျးဆောငျနိုငျခဲ့ကွတဲ့ မိနျးမသားတှေ အနနေဲ့တော့ ဂုဏျယူမိပါတယျ။
Kylie Jenner ကတော့ အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျမှာ ကိုယျဝနျရှိနပွေီဆိုပွီးတော့ ကွညောခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ပထမဆုံးရငျသှေးလေး ဖွဈတဲ့ Stormi Webster ကို ၂၀၁၈ ခုနှဈဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနမှေ့ာ မှေးခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ Kylie ကတော့ အသကျငယျပမေယျ့လညျး သူမရဲ့ခမျြးသာကွှယျဝမှုကဆိုရငျ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၉၀၀ ခနျ့ရှိတာဖွဈပါတယျ။
Sofia Vergara ဟာ အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျမှာ ကလေးမှေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မှေးခဲ့တာကတော့ သားယောကျကြားလေးပါ။
Jamie Lynn Spears ဟာ အသကျ ၁၆ နှဈအရှယျမှာ ကိုယျဝနျရှိနပွေီဆိုတာကို သူမအနနေဲ့ သမီးလေးကို မြှျောနပွေီဆိုပွီးတော့ ကွညောခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ Jamie Lynn Spears ဟာ အဆိုတျော Britney Spears ရဲ့ ညီမအရငျးဖွဈပါတယျ။ Jamie ရဲ့သမီးလေး နာမညျကတော့ Maddie Briann Aldridge လို့ချေါပါတယျ။
Solange Knowles ကတော့ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့အဆိုတျော တေးရေးဆရာမတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျမှာ သားဖွဈသူ Daniel Julez J.Smith,Jr. ကို မှေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ပထမ အမြိုးသားဖွဈတဲ့ Daniel Smith နဲ့ ရခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
Niki Taylor ကတော့ အမရေိကနျရဲ့စူပါမျောဒယျတဈဦးဖွဈသလို အစီအစဉျတငျဆကျသူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျမှာ အမွှာလေးနှဈယောကျရဲ့မိခငျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Naomi Judd ကလညျး အမရေိကနျရဲ့နာမညျကြျော တေးသံရှငျတဈယောကျဖွဈသလို သီခငျြးတှကေိုလညျး ရေးသားခဲ့သူတဈဦးပါ။ သူမရဲ့နာမညျကြျောသမီးကွီးဖွဈသူ Wynonna ကို အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျမှာ မှေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ အဆိုတျော မငျးသမီးဖွဈတဲ့ Wynonna Judd ဟာ အသကျ ၅၄ နှဈရှိပါပွီ။
အမရေိကနျရဲ့ နာမညျကြျောအနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ အဆိုတျော တေးရေးသူ Aretha Franklin ဟာ အခုဆိုရငျ အသကျ ၇၆ နှဈရှိပါပွီ။ သူမကလညျး အသကျ ၁၄ နှဈအရှယျမှာ သူမရဲ့ပထမ ရငျသှေးလေးကို မှေးဖှားခဲ့ပွီး ဒုတိယရငျသှေးလေးကိုတော့ အသကျ ၁၆ နှဈအရှယျမှာ မှေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Shirley Temple ကတော့ ကလေးသရုပျဆောငျဘဝထဲ က နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ မငျးသမီးတဈယောကျပါ။ သူမဟာ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပွီး အဲ့အခြိနျမှာ အသကျက ၈၅ နှဈရှိပါပွီ။ သူမရဲ့ပထမ ရငျသှေးလေးကိုတော့ အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျမှာ မှေးခဲ့ပွီးတော့ အသကျ ၁၇ နှဈနဲ့ အိမျထောငျကခြဲ့တာဖွဈပါတယျ။